Ogaden News Agency (ONA) – Xafiiska Isku duwaha Jaaliyada Ogadenia oo maanta Shir isugu yimid -Canada.
Xafiiska Isku duwaha Jaaliyada Ogadenia oo maanta Shir isugu yimid -Canada.
Posted by Daljir	/ April 29, 2017
Isku duwaha jaaliyada Ogadenia ee wadanka Canada ayaa maanta shir isugu yeedhay qaar kamid ah Xubnaha Xafiiska isku duwaha ee ka howlgala magaalada Edmonton caasimada Gobalka Alberta.
Mudane Abdixakiim Mahamed ayaa Xubnaha Xafiiska la wadaagay warbixin ku saabsan Jaaliyada Ogadenia ee wadanka Canada ,Ogadenia iyo guud ahaan Xaalada uu marayo Halganka uu ku jira shacabka Soomaalida Ogadenia,Mudane Abdikahiim oo ku dheeraaday warbinta qaab u socodka shaqooyinkii loo Idmaday ayaa xubnaha ku booriyay inay Hiil iyo hooba lagarab istaagaan shacabka Ogadenia ay dhibaatadu ku heyso meel badan oo kamid ah Gudaha iyo Dowladah dariska la ah Ogadenia ooy ku soo qaxeen dad aad utira badan.
warbixin kadib waxaa halkaas laga dhageystay dhankooda xubnaha xafiiska iyagoo soo bandhigay xog uruurin ku saabsan laamaha Sirdoonka Gumeysiga Ethiopia oo ku howlan inay shacabka Ogadenia Qorsha cusub ku dhaxtuuraan iyaga oo adeegsannayay kuwa wata calaamadaha horay loogu yiqiin Jabhada wadaniga xoreynta Ogadenia.
Ugu danbeys waxaa hoosta laga xariiqay in halganka uu shacabka Ogadenia ku jiro loo huro maal,maskax iyo wakhtidheeri ah si dhab ahna looga hortago wax kasta oo shacabka Ogadenia ee Gobanimadoonka ah mad madoowna ku abuuri kara.